Iziqongo ze-Crochet, izitayela zasehlobo | Bezzia
Iziqongo ze-Crochet, okuwumkhuba ehlobo
UMaria vazquez | 12/05/2022 18:00 | Ngigqokani, Amathrendi
I-Los iziqongo ze-crochet babuyela minyaka yonke emaqoqweni emfashini ukuze bamemezele ukusondela kwehlobo. Bakwenza ngokugqama okukhulu noma okuncane kuye ngonyaka, futhi ngama-nuances ahlukene ukuze bazivumelanise nezitayela. Le nkathi, isibonelo, kukhona izitayela ezintathu ezigqamayo kwezinye.
I-Las amaqoqo entwasahlobo-ehlobo 2022 I-Zara, i-Sfera noma i-Free People isinika, ikakhulukazi, iziqongo ze-crochet ngamathoni emvelo. Kodwa lezi akuzona ezivelele kakhulu, kodwa imiklamo enemibala eminingi ene-flower motifs naleyo lapho i-crochet ihlanganiswe nezinye izindwangu.
1 Iziqongo ezimhlophe noma ngamathoni emvelo
2 Iphezulu enezithombe ezimibalabala
3 Amabhulawuzi anemizimba yokukhilosha
Iziqongo ezimhlophe noma ngamathoni emvelo
Iziqongo ezinemibala yemvelo yizona ezidume kakhulu emaqoqweni amanje. Ikakhulukazi lawo amathoni amhlophe-mhlophe noma amatshe, ahlukahlukene kakhulu futhi kulula ukuwahlanganisa. Lezi ngokuvamile zibonakala ngephethini yazo, iqonde nge imichilo ewugqinsi nentamo eyindilinga, njengemiklamo yekhava ye-Zara. Nakuba kungenzeka futhi ukuthola ama-cardigans anemikhono emifushane namakholomu amahle njengaleyo evela ku-Free People eqinile.
Iphezulu enezithombe ezimibalabala
Ingabe ufuna imiklamo ejabulisayo? Bheja imiklamo ngombala noma ngemibalabala. Uzothola iziqongo ze-crochet zalesi sizini ngemibala egqamile njengohlaza, ophuzi kanye nopinki. Futhi kanye nalezi, ezinye imiklamo ye-bohemian eyengeziwe nge i-multicolored flower motifs.
Amabhulawuzi anemizimba yokukhilosha
Kumelwe sivume ukuthi phakathi kweziphakamiso esikhuluma ngazo namuhla, lokhu kuyintandokazi yethu entwasahlobo. Futhi kungukuthi lawa ma-blouses ahlanganisa imizimba ye-crochet noma amapaneli angaphambili Basinqobile. Bagcina ibhalansi ephelele phakathi kwe-bohemian (ukukhilosha) kanye nezothando (imikhono ekhukhumele, ama-ruffles ...).
Uzothola iziphakamiso ezimbalwa zalolu hlobo ezimhlophe kanye nezinye lokho hlanganisa i-floral motifs. Ingabe uyathanda leyo top crochet enezimbali ezimhlophe neziluhlaza okwesibhakabhaka kanye nemikhono emifushane ye-puff njengoba ngenza? Kuyidizayini yeZara.
Ingabe uyazithanda iziqongo zokukhilosha? Ingabe unayo ekhabetheni lakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » Iziqongo ze-Crochet, okuwumkhuba ehlobo
I-cut-out iyabuya kuleli hlobo
Okuthrendayo ku-manicure yomakoti ka-2022